पूर्वसचिव कार्की पत्नी हत्या प्रकरणः के भयो, किन सोझियो कामदारमाथि आशंका ?
घटनापछि कार्की निवासमा जम्मा भएका स्थानीय ।
काठमाडौं– सधैंझैं सोमबार विहान पनि पूर्वसचिव अर्जुन कार्की मर्निङ वाकमा निस्कने तरखर गर्दै थिए । सोमबार भएकाले उनले सधैं सिनामंगलमा गएर गल्फ खेल्नुको साटो पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने निर्णय गरे । दुई घन्टा लामो दर्शनपछि उनी घर फर्किए ।
उनको दैनिकी नै यही थियो । घरमा श्रीमती मुना कार्कीले पकाएको खाना कार्की गएलगत्तै खाइन्थ्यो ।
तर, सोमबार उनले श्रीमती कार्कीले पकाएको खाना खान पाएनन् ।
बरु सोमबार उनले जीवनमा जे सोचेका थिएनन्, त्यही भोग्न पर्यो । जे सोचेका थिए, त्यो हुन पाएन ।
अरु दिन घरको गेटमा पुगेर हर्न बजाएपछि कामदार वा पत्नीमध्ये एक उनका लागि गेट खोल्न आइपुग्थे । तर, सोमबार विहान केहीबेर हर्न बजाउँदा पनि नआएपछि कार्कीले आफैं गेट खोले, बाहिरबाट । अनि गाडी पार्क गरेर भित्र पुगे ।
मर्निङ वाककै लागि विहान घरबाट निस्किएका कार्की सोमबार विहान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किँदा ११ बजेर २० मिनेट गइसकेको थियो । कार्की सोझै भान्सामा जाने तयारीमा थिए, त्यहाँ नै श्रीमती भएको सायद उनले सोचेका थिए ।
तर, किचनमा पुग्नुअगावै उनले डाइनिङमा आफ्नो घरमा काम गर्ने विजय चौधरीलाई झुन्डिरहेको अवस्थामा देखे । त्यसपछि उनी आत्तिँदै भान्सामा छिरे ।
जब उनी भान्सामा पुगे, उनले सोच्नै नसक्ने दृश्य देखे– उनकी श्रीमती रक्तमुछेल अवस्थामा किचनको भुइामा छटपटाइरहेकी थिइन्, उनको घाँटीमा एउटा डोरी बाँधिएको थियो ।
‘आज नै मैले पशुपति दर्शन गरेर आएँ, आज नै मेरो घरमा यस्तो,’ कार्कीले श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्याइसकेपछि घरबाहिर बस्दा बारम्बार भनिरहेका थिए । मानौँ, उनको भगवानमाथिको आस्थामा ठूलो चोट पुगेको थियो, उनी भगवानलाई किन निर्दयी बनेको भन्ने प्रश्न गरिरहेका थिए ।
यति बेला विहानको साढे ११ बजेको थियो । श्रीमतीलाई रक्तमुछेल अवस्थामा देखेपछि ठूलो स्वरमा चिच्याएका थिए, कार्की ।
उनको त्यो चिच्चाहट सुनेर एक छिमेकीले प्रहरीलाई फोन गरिदिएका थिए । त्यसपछि प्रहरी कार्कीको घरमा पुगेको थियो । प्रहरीले पुगेलगत्तै श्रीमती कार्कीलाई अस्पताल पुर्यायो । सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालमा चिकित्सकहरुले श्रीमती कार्की पुगेलगत्तै मृत घोषणा गरे ।
के देखिएको छ सिसिटिभीमा ?
कार्की निवासमा र वरपर राखिएका सिसिटिभी क्यामेराका भिडियो फुटेजहरुअनुसार भान्सा कोठामा कामदार विजय चौधरीले कार्कीपत्नी मुनालाई पिर्काले हानेको देखिएको छ । त्यसअघि उनी भान्सा कोठामा नै थिए ।
यो विहान १० बजेको घटना हो । मुना भान्सामा पसेपछि विजयले एक्कासी उनलाई आक्रमण गर्छन् । मुना विजयको आक्रमणमा परेर लड्छिन् । मुनालाई विजयले डोरीको सहयोगमा आक्रमण गरेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार विजय र मुनाबीच भान्सामा केही भनाभन भएको र विजय मुनाको वरपर घुमेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मुनालाई पछाडिबाट घाँटीमा डोरी बाँधेर विजयले लडाएका छन् । मुना भुइँमा लडेलगत्तै विजयले उनलाई पिर्काले हिर्काएका छन् ।
त्यति बेला मुनाले प्रतिकार गर्न खोजेकी थिइन् । तर, विजयका अगाडि उनको केही लागेन । मुनालाई रक्ताम्य हुनेगरि टाउकोमा पिर्काले प्रहार गरेपछि विजय त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन् ।
त्यसको केही समयमा विजय फेरि भान्सा कोठामा पस्छन् । फेरि निस्किन्छन् । ओहोरदोहोरको यो क्रम केहीबेर चलिरहन्छ ।
विहान ११ बजेसम्म विजय भान्सा कोठामा बारम्बार जाने आउने गरेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ । त्यसपछि उनलाई सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छैन ।
यसको अर्थ पूर्वसचिव कार्की घर फर्कनु केही मिनेटअगाडिसम्म विजयले आफ्ना गतिविधि देखाइरहेका थिए । तर, जब कार्की घर पुगेका थिए, त्यति बेला विजय झुन्डिइसकेका थिए ।
कार्की दम्पत्तीले छोराजस्तै माया गर्थे चौधरीलाई
पूर्वसचिव कार्की पहिले बानेश्वरमा बस्थे । अलिक फराकिलो ठाउँमा घर बनाउन भनेर नै दश वर्षअघि उनी त्यहाँ पुगेका थिए ।
उनका दुई छोरी र एक छोरा छन् । दुई छोरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका र अष्ट्रेलियामा छन् भने १० वर्षका छोरा उनीहरुसँगै बस्थे । सोमबार घटना हुँदा कार्कीका १० वर्षीया छोरा स्कुल गइसकेका थिए ।
कार्कीले घरमा श्रीमतीलाई सहज होस् भनेर केही वर्षअघि दाङबाट चौधरीलाई सहयोगीका रुपमा घरमा ल्याएका थिए । उनको कामबाट उनीहरु सन्तुष्ट थिए, कार्कीले चौधरीलाई गाडी पनि सिकाइरहेका थिए ।
उनका छिमेकीहरुका अनुसार यो घरमा यसअघि कहिल्यै कल वा झगडा सुनिएको थिएन । सबै शान्त थियो ।
तर, सोमबारको घटनामा कार्कीका घरमा काम गर्ने विजयले आकस्मिक रुपमा यस्तो घटना गरेको हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले फरकधारसँगको सम्पर्कमा भने, ‘प्रारम्भिक रुपमा बुझ्दा चौधरीमाथि नै आशंका बढी छ किनकि उनले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।’ प्रहरीले यसलाई लामो र नियोजित नभइ आकस्मिक रुपमा केही विषयमा चित्त नबुझ्दा भएको घटना हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
काठमाडौंको अर्को हाइप्रोफाइल हत्या घटनाः अहिलेसम्म रहस्यमयी
झ्यालबाट हेर्दा झा ओछ्यानमा नै चलमल नगरी बसेको देखेपछि उनीहरुले प्रहरीलाई फोन गरे । प्रहरी आठ बजे झाको घरमा पुग्यो । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि भन्यो– झाको हत्या भएको बलियो प्रमाण भेटियो । त्यो प्रमाण हो– झाको घाँटीमा र टाउकोमा चोट लागेको थियो । उनको ओछ्यानमा झाको छातीमा घरको भान्सामा प्रयोग भएको चक्कु पनि भेटियो । दिउँसो ३ बजेसम्म प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्यो । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले घरमा काम गर्ने दुई माली र भान्सेलाई पक्राउ गर्‍याे ।
तर, यसबारे अहिलेसम्म अनुसन्धान सकिएको छैन ।